स्वच्छ छविका कांग्रेस उम्मेदवार छोडेर नयाँ शक्तिका विवादित व्यक्तिलाई नेप्सेको सीइओ किन नियुक्त गरे देउवाले ?
ARCHIVE, MUDRA MAMILA, SPECIAL » स्वच्छ छविका कांग्रेस उम्मेदवार छोडेर नयाँ शक्तिका विवादित व्यक्तिलाई नेप्सेको सीइओ किन नियुक्त गरे देउवाले ?
काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेस भित्र 'पार्टी ठुलो कि पैसा' भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुएवाको ठाडो आदेशमा नेप्सेको जीएमका लागि उम्मेदवार बनेका काँग्रेस निकट उम्मेदवार प्रमोद राज शर्मा र मनोज ज्ञवालीलाई लत्याउँदै शेर बहादुर देउवाले यौन काण्डमा परेका र 'इन्साइडर ट्रेडिङ' जस्तो गम्भीर अपराधका आरोपित र माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका चन्द्र साउदलाई नेप्सेको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेसभित्र यस्तो बहस सुरु भएको हो ।
यसो त यो नियुक्तिका लागि साउदले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको जानकारहरु बताउँछन् । नेप्सेमा साउद नियुक्त भएपछि कांग्रेसी बैंकर, र कर्पोरेट क्षेत्रमा रहेका कांग्रेसी कार्यकर्ताबीच पार्टी भन्दा ठुलो पैसा रहेको बहस सुरु भएको छ । साउदलाई नेपाल इन्सुरेन्स डुबाएको देखि महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको समेत आरोप छ ।